ရထားထဲမှာအားဖြင့်ဥရောပပျေါလှငျ3ရက်သတ္တပတ် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ရထားထဲမှာအားဖြင့်ဥရောပပျေါလှငျ3ရက်သတ္တပတ်
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 19/08/2020)
တစ်ဦးက quintessential ခရီးသွားခရီးရထားဥရောပခရီးရန်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစာရှောင်ခြင်းတို့သည်ဦးစားပေးဖြစ်လာ Eco-friendly ခရီးသွား နည်းလမ်း. ခရီးသွား, အနှစ်သာရအတွက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းခြုံငုံထင်ဟပ်ရန်အတွက်ဆွေးနွေးပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ခြုံငုံထင်ဟပ်ရန်အတွက်ဆွေးနွေးမသာ. စိန့်စဉ်းစားကြည့်ပါ. သြဂတ်ရဲ့တီထွင်ခဲ့တယ်စကားလုံးများကို, "ဒီကမ္ဘာကြီးဟာစာအုပ်သည်နှင့်ခရီးသွားမကျင့်သောသူတို့ကို, "တစ်ဦးတည်းသာစာမျက်နှာကိုဖတ်ရှု.
ဒီနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူခုနှစ်တွင်, ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ဆက်သွယ်မှုသည်မြန်ဆန်။ ဒေါသကြီးသည်. ယင်း၏အကျိုးခံစားခွင့်များအားလုံးနှင့်အတူ, နယ်လှည့်ခြင်းနှင့်အသက်တာ၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်ဆုံးရှုံးဆက်သွယ်မှု, ပစ္စုပ္ပန်တခဏ. ရထားဥရောပ Inspire ကတဆင့် trips, အဆင်ပြေခြင်းနှင့်ရင်ခုန်စရာများမှာ.
မီးရထားခရီးသွားလာထင်ရှားတဲ့ရှိရာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်တိုက်ရိုက်မကျင့်ကိုသူတို့အဘို့, ကလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်စွန့်စားမှုရှိနိုင်ပါသည်. ဥရောပရထားခရီးသွား၏နောက်ထပ်အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အရေးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ, လေဆိပ်နဲ့မတူပဲ, ဥရောပရထားဘူတာညာဘက်မြို့ရွာအလယ်၌တည်ရှိသည်. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုညှိခရီးသွားဘတ်ဂျက်၏မလိုအပ်သောကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချ.
ဥရောပတဆင့်ရထားရွေးချယ်ရာတွင်အားဖြင့်, ငါတို့ထိတွေ့ဆက်ဆံပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးပိုကျွန်တော်တို့ဟာအများအားဖြင့်ထက်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုမသာကြောင်းခရီးသွားတစ်ဦးနည်းလမ်းများရွေးချယ်ရာတွင်နေကြတယ်. တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောလမ်းကြောင်းတဆယ်နှစ်လုံးကိုအဓိကဥရောပပျေါလှငျထဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အကြောင်းကို၌ပြစ်မှားမိသည်ကို3ရက်သတ္တပတ်. ဥရောပပေါ်လွင်ချက်များအားဖြင့်ရထားခုနှစ်တွင်ခရီးသွားရန်မည်သို့မည်ပုံထွက်ရှာတွေ့မှအပေါ်ကိုဖတ်3ရက်သတ္တပတ်.
ရထားနေ့အားဖြင့်ဥရောပပျေါလှငျ 1: ဗီယင်နာ, သြစတြီးယား
ဥရောပခရီးကနေတဆင့်မီးရထားဗီယင်နာမြို့တွင်စတင်ခဲ့သည်, သြစတြီးယား၏မြို့တော်. စွန့်စားမှုစောင့်ဆိုင်းနှစျယောကျဘုနျးကွီးသောရက်ပေါင်း. Baroque streetscapes နှင့်ဧကရာဇ်ဘုံဗိမာန်အနုပညာတခုအဖြစ်ဖို့သေံသတ်မှတ်ထား, ဗိသုကာ, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဂီတလက်ရာ. ဤသည်က၎င်း၏ငြူစူခြင်းကော်ဖီအိမျယဉ်ကျေးမှုနှင့်တက်ကြွဒီဇိုင်းမြင်ကွင်းများနှင့်အတူဖြစ်ပါသည်.
mumok သည့်အခါဗီယင်နာအတွက်-မဖြစ်မနေလုပ်ပေးနေသည်. ဒါဟာသူ့ရဲ့ Avant-garde နှင့်တစ်ခါတစ်ရံအနုပညာဖန်တီးမှု shocking များအတွက်လူသိများသည်, Pablo Picasso နဲ့ Andy Warhol အားဖြင့်အကျင့်ကိုကျင့်များပါဝင်သည်အရာ. ယင်း၏တခုလုံးကိုစုဆောင်းခြင်းနီးပါးပါဝင်ပါသည် 10,000 အနုပညာပျော်မွေ့.
နေ့ 2: Salzburg, သြစတြီးယား
ဥရောပအားဖြင့်သင်တို့၏ရထားဆက်လက်, သြစတြီးယားရဲ့ Salzburg မြို့အတွက်တစ်ရက်ဖြုန်း. ဒါဟာဂျာမနီ၏နယ်စပ်တွင်ဖြစ်ပြီးရှိပါတယ် အံ့မခန်းအမြင်များ အရှေ့အဲလ်ပ်တောင်တန်း၏. ကျော်ကြားမှုမှ Salzburg ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကမ္ဘာ့အကြီးမြတ်ဆုံးတေးရေးဆရာနေရာဖြစ်သည်တစ်ချိန်ကခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်း-စာအုပ်မြို့ဖြစ်နေလို့ပါ, မိုဇတ်.
အဆိုပါတောင်ကုန်း Salzburg အတွက်အသက်ရှင်ရကြ၏. ဒါဟာတစ်ချိန်ကအလွန်အမင်းချီးကျူးများအတွက်ရိုက်ကူးရေးနေရာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်, '' ဂီတ၏အသံ 'နှင့်အနုပညာဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖွဲ့ဝင်များကိုအသိလည်းမရှိ. ဒါဟာအစတစ်တိတ်ဆိတ်အေးချမ်း exudes.
ဥရောပပျေါလှငျ နေ့ရက်များ 3: မြူးနစ်, ဂျာမနီ
မြူးနစ်နှင့်၎င်း၏ဘာသာစကား Bavarian အမွေအနှစ်ဘီယာနှင့်စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်အစဉ်အလာဟာသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းခဲ့ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းဘယ်မှာ, နီးပါးခုနစ်ခုရာစုနှစ်. အဆိုပါ Oktoberfest မြူးနစ်အတွက်စာရင်း၏ထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာကမ္ဘာလုံးကျော်အားလုံးအနေဖြင့်ခရီးစဉ်ကိုလူတွေသန်းပေါင်းများစွာတို့ကဂုဏ်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်, အဆိုပါပွဲတော်၌မဆက်ဆံနှင့်ရန်.
နေ့ 4: စတုဂတ်, ဂျာမနီ
စတုဂတ်တစ်ဦးကြော့ခံစားရှိပါတယ်, အစာရှောင်ခြင်းကားများနှင့်ဖန်စီစားသောက်ဆိုင်ခေတ်သစ်အသက်တာ၏တစ်ဦး ambiance ဖန်တီးပေမယ့်ကိုယ့်ခေတ်သစ်ထက်စတုဂတ်ဖို့ပိုအရပ်၌. စတုဂတ်တစ်ဦးကို တင်. ပြန်လည်ပြသသောစပျစ်ရည်ကိုကွားစခနျးမြားနှငျ့ရင်ဘတ်-ခွံမာသီး shaded ဘီယာဥယျာဉ်ရှိပါတယ်, ထောက်သင်၏ခြေကန်.
ဥရောပပျေါလှငျ နေ့ရက်များ 5: Strasbourg, ပြင်သစ်
ရထားပေါ်တွင်ကျောဖွယ်ရှိနေသည်, ဒါကြောင့်ပြင်သစ်မှပယ်ဖွင့်! Strasbourg အတွက်တစ်ရက်ဖြုန်း.
တစ်ဦးအလယ်ခေတ်အတိတ်နှင့်တိုးတက်သောအနာဂတ်အကြား Strasbourg ခွင်. ၎င်း၏ Gothic အဘိဓါန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဗိသုကာအံ့သြစရာ နှင့်အဟောင်းမြို့ရဲ့လိမ်လမ်းကြားမှတဆင့် roaming နှင့်သက်သေမပေါ်အစားအစာခံစားအလွန်အမင်းအကြံပြုပါတယ်.
Strasbourg ရထားမှ Dijon
နေ့ရက်များ6– 8: ပဲရစ်, ပြင်သစ်
ပဲရစ်အဆိုပါ Eiffel မျှော်စင်အပါအဝင်ယင်း၏အထင်ကရဗိသုကာနှင့်အတူနည်းနည်းမိတ်ဆက်လိုအပ်ပါတယ်, အဆိုပါ Arc de Triomphe, နှင့် Notre Dame ဘုရားရှိခိုးကျောင်း. Parisian အဆိုပါစကားလုံးစတိုင်နှင့်အတူပြောရလျှင်နှင့်ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်အဘို့ဖြစ်၏. မျှော်လင့်ထား ကမ္ဘာ့အတန်းအစားအစားအစာ, စျေးဝယ်, နှင့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ချမ်းသာတဲ့-အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှအရင်းအမြစ်ဖြစ်သောပြခန်း. ဥရောပအကောင်းဆုံးရထားခရီးစဉ်များအမြဲဒီကျော်ကြားတဲ့မြို့ပါဝငျမညျ.
ဥရောပပျေါလှငျ နေ့ရက်များ9& 10: ဘရပ်ဆဲလ်, ဘယ်လ်ဂျီယံ
ပဲရစ်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်အတူ wooed ပြီးပါက, ဘရပ်ဆဲလ်မှာရှိတဲ့လာမည့်နှစ်ရက်သုံးဖြုန်း, လာမယ့်ရထားခြေထောက်မတိုင်မီ. ဘရပ်ဆဲလ်မှာရှိတဲ့နှစ်ရက်မျက်နှာစာ Deco အနုပညာထားရှိရေးနဲ့ Grand နန်းတော်စတုရန်းသွားရောက်လည်ပတ်ဦးမည်. ဒါဟာမြို့၏စိတ်နှလုံးထဲမှာတည်ရှိပါတယ်ရဲ့, ဘယ်မှာ 17ကြိမ်မြောက် ရာစုအတိတ်ဘဝမှကြွလာ.
နေ့ရက်များ 11 – 13: အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်
အမ်စတာဒမ်ရှိရာသမိုင်းဝင်တူးမြောင်းတစ်လျှောက်အပျော်စီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်, အမြားအရာဖြစ်ပါသည်, နှင့်ပြတိုက်မှတဆင့်အေးအေးဆေးဆေးလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် စပျစ်သီးကိုအပြည့်ဖြည်ဆိုင်များ. အရက်သောက်, ထမင်းစားခန်းနှင့်ဒီဇိုင်းမြင်ကွင်းများ enthrall နှင့်ဖျော်ဖြေရေး. အမ်စတာဒမ်အံ့သြစရာတစ်ခုမြို့ဖြစ်၏နှင့် Van Gogh ပြတိုက်မှနေအိမ်အဖြစ်ခင်းကျင်းပြသသည်အခြားဘဏ္ဍာဟာ host ဖြစ်ပါသည်.
ဥရောပပျေါလှငျ နေ့ရက်များ 14 – 17: Bremen & ဘာလင်, ဂျာမနီ
ဂျာမနီမှဦးခေါင်းနောက်ကျောနှင့် Bremen အတွက်ဥရောပကနေတဆင့်မီးရထားပေါ်ငါးရက်ဖြုန်း, ဘာလင်, နှင့် Dresden. Bremen များအတွက်တစ်နေ့တွင် (အောက်ကပုံထဲမှာ), ထိုကဲ့သို့သော Bremen ပြည်ပပြတိုက်အဖြစ်က၎င်း၏အများအပြားပြတိုက်များနှင့်ပြခန်းလာရောက်လည်ပတ်. ဒါဟာဆိပ်ကမ်းမြို့ရဲ့, ဘယ်မှာလတ်ဆတ်တဲ့ပင်လယ်စာကိုခံစားခြင်းနှင့်တစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆိပ်ကမ်းသမိုင်းတွေအကြောင်းသင်ယူဖို့ Bremerhaven ဖြစ်ပါသည်.
ဘာလင်နှစ်မြှုပ်ခြင်း၏သုံးရက်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ဘာလင်ကို 'အိပ်ဘယ်တော့မှမြို့' 'ဖြစ်ခြင်းများအတွက်ဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ်. ယင်း၏ vibrancy ၏အားသာချက်ကိုယူ! ညရွှင်လန်းမှုအတွက်ဖြစ်ကြပြီးရက်ပေါင်းယဉ်ကျေးမှုရေးရာအဘို့ဖြစ်ကြ၏.
နေ့ 18: Dresden, ဂျာမနီ
Dresden မှသာတစ်နေ့လိုအပ်ပါတယ်, ယင်း၏ရန်းခုံးနှင့်၎င်း၏ဗာဆိုင်း-မှုတ်သွင်း Zwinger နန်းတော်အိမ်များပြတိုက်အဖြစ်အံ့ဩ. အဆိုပါမြို့မှာတည်ထောင်ခဲ့ပါသည် 1743 နှင့်ကမ္ဘာစစ်အပြီးပြန်လည်ဆောက်လုပ်ကြရသည် 2. ဒါဟာ 'အ Elbe ၏ Florence ချစ်စနိုးထားပြီး’ ယင်း၏ idyllic တည်နေရာကိုကျေးဇူးတင်.
ရထား Dresden မှ Potsdam
Nuremberg Dresden မှရထား
ဥရောပပျေါလှငျ နေ့ရက်များ 19 – 21: ပရာ့ဂ်, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
ဥရောပ၌ရထားခရီးစဉ်ကိုပရာ့ဂ်အတွက်အဆုံးသတ်, အံ့သြစရာတစ်ခုလေဘွေပြီးနောက်. ပရာ့ဂ် spiers ၏မြို့သည်နှင့်မကြာခဏပဲရစ်၏ဂုဏ်အသရေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါနေသည်. ဒါဟာအစဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးဘီယာမှနေအိမ်အဖြစ်ဖော်ပြထားရဲ့. တစ်ဦး၏မျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောခံစားကြည့်ပါ 14ကြိမ်မြောက် ရာစုသောကျောက်တံတား, တစ်တောင်ထိပ်ရဲတိုက်နှင့်ပျင်းရိမြစ်. ဒါဟာဥရောပမှတစ်ဆင့်ရထားခရီးကိုအဆုံးသတ်ဖို့ပြီးပြည့်စုံသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်.
ဥရောပအကောင်းဆုံးရထားခရီးစဉ်များသေချာသင်အဆင်ပြေအနားယူဖြစ်ကြစေမည်. လမ်းတစ်လျှောက်ရှုခင်းလေးမွတျ, တတ်နိုင်သမျှအများအပြားမြင်ကွင်းများအဖြစ်မီးရထားနှင့်ဆှဲခွငျးအားဖွငျ့ခရီးသွားများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှု. ခရီးသွားစရာပိုကောင်းလမ်းရှိပါတယ်. အတူစာအုပ် တစ်ဦးကရထား Save ယနေ့တွင်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “ရထားထဲမှာအားဖြင့်ဥရောပပျေါလှငျ3ရက်သတ္တပတ်” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropean-highlights-by-train%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, သင် / TR မှ / က de သို့မဟုတ် / es နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#traveleurope EcoFriendlyTravel ဥရောပသမဂ္ဂ europetravel ရထားခရီးသွား